ekhaya / Church / amiswa / uMthendeleko
Kutheni amaKatolika uMthendeleko iQumrhu kunye ngeGazi likaYesu?
Impendulo elifutshane ukuba amaKatolika uMthendeleko iQumrhu kunye ngeGazi likaYesu kuba wafundiswa nguYesu, ngokwakhe, kwaye ibhalwe eBhayibhileni.
Ngobusuku eyanikelwa ngabo, Wahlanganisa abapostile bakhe ukuze kubhiyozela iPasika, isidlo yezinkonzo ezityiwa ngamaSirayeli (phezu eve inkululeko yabo kubukhoboka baseYiputa).
Isidlo sePasika yayiquka inyama yemvana lenzelwa (ukubona Eksodusi, 12:8). ISidlo, olwabanjwa ngomhla olwandulela yenkululeko yomntu kwisono, luyinzaliseko iPasika.
Ngobo busuku, ngoku eyaziwa ngokuba ngoLwesine Holy, uJesu, iMvana kaThixo, wanika Inyama yakhe neGazi ukuba ityiwa ethembekile–sacramentally, ngokohlobo Isonka Wine.1
AmaNgqina kaYehova kunye namanye amaqela ngokuqhelekileyo bekwalela ukuba imfundiso yamaKatolika Yukariste kwimihlaba kuhlukumeza ukungavunyelwa iTestamente Endala nxamnye ukudliwa kwegazi. Xa yeVangeli kaMarko 7:18-19, kunjalo, UYesu wasisusa isihlabo kaMoses izithintelo-kuquka yokudla ukudla igazi-kubalandeli bakhe. Xa iBhunga waseYerusalem abaPostile abalela ukudliwa kwegazi, nangona kuphela kwiimeko ezithile ukuze ngokungeyomfuneko ukukhubekisa amaYuda (ukubona kwiZenzo zabapostile 15:29 yaye 21:25).
isonka ukuthatha, esiba nayo, breaking, kwaye nokuyidlulisela phakathi kwabapostile, jesus uthe, "Thatha, udle; ngumzimba wam lo " (Matthew 26:26). Ngoko Wathabatha nendebe, leyo nayo wabasikelela, wabanika, bathi, "Othululwayo, nonke; kuba ligazi lam eli lomnqophiso, eliphalala ngenxa yabaninzi, ukuze kuxolelwe izono " (Matthew 26:27-28). Nangona uYesu wayesoloko ethetha liphuzu ngexesha lobulungiseleli bakhe, ngawo lo mzuzu kubaluleke yena wathetha ngokuphandle. "Lo ngumzimba wam," Uthe, ngaphandle kwengcaciso. "Ligazi lam." Kunzima ukuba nomfanekiso uNdikhoyo ekusenokwenzeka ukuba ngqo ngakumbi.
iziko kaYesu Yukariste kwiSidlo Last uzalisekisa Bread wakhe wodumo entshumayelo Life, leyo ibhalwe kwisahluko wesithandathu yeVangeli kaYohane. Le ntshumayelo utshayelela yi-phindo lwe zonka neentlanzi, apho amawaka Wondla evela imali encinane yokutya (bheka uJohane 6:4 nangona loo mmangaliso livela kuzo zonke ezine zeVangeli). Lo msitho isikweko UNYAKA, ezenzeka njengoko wenza ngexesha iPasika siphethwe lwenziwa yi indlela efanayo kamva uYesu uza kusebenzisa kwi Yokugqibela Sangokuhlwa-Wazithabatha izonka, ubonga, futhi babahlalise (John 6:11). Xa abantu ubuye ngosuku olulandelayo ukuba ufuna umqondiso ovela kuye, sikhumbula indlela ookhokho babo anikwe imana entlango (njengoko ku Eksodusi 16:14), uJesu uyaphendula, "Enyanisweni, ngempela, Ndithi kuwe, AsinguMoses oninike isonka esiphuma ezulwini; NguBawo oninika isonka esiphuma ezulwini. Kuba isonka sikaThixo sesi sehlayo ezulwini, silinike ubomi ihlabathi " (John 6:32-33).
"Nkosi, sinike eso sonka ngamaxa onke,"Bakhala (John 6:34).
"Ndim isonka sobomi,"Uyakuphendula; "Lowo uzayo kum, akasayi kulamba, lowo ukholwayo kum, akasayi kuza anxanwe naphakade " (6:35). Nakuba amagama enza amaYuda ukuxakeka, UYesu kuyaqhubeka, intetho yakhe eyandayo chu graphic kakhulu:
47 "Enyanisweni, ngempela, Ndithi kuwe, Lowo ukholwayo unobomi obungunaphakade.
49 Ooyihlo bayidla imana leyo entlango, baza bafa.
50 Siso eso isonka esehla sivela ezulwini, ukuba umntu adle kuyo angafi.
51 Ndim isonka esiphilileyo, esi sehlayo emazulwini; Ukuba ubani uthe wasidla esi sonka, uya kuphila ngonaphakade; yaye ke isonka endiya kuyinikela ubomi behlabathi, siyinyama yam ' (6:47-51; ugxininiso added).
ivesi 51 iqulathe ubungqina bokuba uYesu ngokubaleka ngokomfanekiso, ngokuba ichaza Bread leyo kufuneka ityiwe njengoko Inyama efanayo ukuba wayeza kubandezeleka aze afe emnqamlezweni. Ukuze sithi xa wayebhekisela enyameni yakhe kwesi sicatshulwa yena wayethetha ngokufuziselayo kukuthi i Nenyama ubunzima waza wafa emnqamlezweni nje uphawu, kuba omnye ofanayo!2
"Angathini na lo ukusinika inyama yakhe ukuba adle?"Abantu bathi (6:52).
Nangona yethusayo yabo, UYesu uqhubeka zonke ngakumbi kwacaca:
"Enyanisweni, ngempela, Ndithi kuwe, ngaphandle kokuba nidle inyama yoNyana woMntu, nilisele igazi lakhe, aninabo ubomi kuni; Lowo uyidlayo eyam inyama, alisele elam igazi, unobomi obungunaphakade, ndaye mna ndiya kumvusa ngomhla wokugqibela. Kuba inyama yam ikukudla, inyaniso, kunye negazi lam liluselo, inyaniso. Lowo uyidlayo eyam inyama, alisele elam igazi lam uhlala kum, nam ndihleli kuye. Njengoko uBawo ophilileyo wandithumayo, ndibe nam ndiphilile ngenxa enoBawo, lowo undidlayo kwayena uya kuphila ngam. Siso eso isonka esehla sivela ezulwini, onjalo njengokuba imana, bafa; Lowo usidlayo esi sonka, uya kuphila ngonaphakade " (6:53-58; ugxininiso added).
Ekubhiyozeleni uMthendeleko ube negalelo kubomi ngamaKristu okuqala, ngubani "bazinikela mfundiso zabapostile kunye nobudlelwane, ukuya ekuqhekezeni isonka kunye nemithandazo ' (Bona kwiZenzo zabapostile 2:42). Qaphela ukuba "ekuqhekezeni isonka kunye nemithandazo 'ibhekisela inkonzo.
Kuphela iminyaka embalwa emva kokufa uMpostile wokugqibela, Saint Ignatius of Antiyokwe (d. njengoko. 107) wachaza inkonzo ngendlela efanayo, ukuyilahla ngabaqhekeki for ukuzikhwebula 'ukusuka Yukariste yaye sithandaze " (Ileta eya Smyrnaeans 6:2). Ukuze ibandla lokuqala, uphinde, wathatha Sunday, imini yoVuko, njengoko iSabatha wakhe abakhankanywe kwiZenzo zabapostile 20:7, othi, "Ngosuku lokuqala lweveki, ... ukuba abafundi bahlanganisene ukuba baqhekeze isonka ... " (cf. Didache 14; Justin ngegorha, First Ukuxolisa 67).
Saint Paul chonga zombini imana kunye eweni kukuhlanza namanzi amaSirayeli njengoko izikweko UNYAKA. "Bonke batya ukutya okufanayo kwemvelo basela bonke olo luselo lunye kwemvelo,"Yena ubhala. "Kuba babesela kwiliwa kwemvelo leyo libalandela, iliwa elo ke lalinguye uKristu " (Bona Incwadi yakhe yokuqala Corinthians10:3-4 kwakunye eNcwadini yeZityhilelo 2:17). Uqhubeka balulekeni abaseKorinte ngenxa yokuswela kwabo hlonipho kokufumana uMthendeleko, yokubhala:
11:23 Kuba mna ndakwamkela kuyo iNkosi oko ndikunikeleyo nokukunikela kuni, Okokuba iNkosi uYesu, ngobusuku eyanikelwa ngabo, yathabatha isonka
24 yaza yakuba ibulele, yasiqhekeza, wasiqhekeza, wathi, Lo ngumzimba wam owaphulelwa nina. Oku kwenzeleni ukundikhumbula.
25 Ngendlela efanayo nayo indebe, emva kokuba kudliwe, bathi, Le ndebe ingumnqophiso omtsha osegazini lam. yenza le, ngamaxesha onke enisukuba niyisela, kwenzeleni ukundikhumbula.
27 whoever, ke, esidla eso sonka, ayisele indebe yeNkosi, ngokungafanelekileyo, woba netyala yokuhlambela lomzimba negazi leNkosi.
28 Makazicikide ke ngokwakhe umntu, aze ngokunjalo adle kwisonka eso, asele kwindebe.
29 Kuba nawuphi na umntu lowo udlayo, uselayo, engawucaluli nje udla umzimba aziselele umgwebo phezu ngokwakhe.
30 Kungenxa yoko le nto baninzi phakathi kwenu abaswele amandla, nabayimilwelwe, yaye abanye baye bafa (bona Matewu 5:23-24, kakhulu).
ngokuba ivesi 27, ukufumana uMthendeleko, ngokungafanelekileyo, woba ukona uMzimba neGazi leNkosi. ke, oko kuluncedo ukubuza: yayiza kubonwa njani ukwamkelwa anibufanele isonka eziqhelekileyo kunye newayini mali ukuya kusisono Elilawulayo kunye ngeGazi likaYesu? UPawulos uthi nkqu ukuba yolwamkelo abangahloneli Thixo ka uMthendeleko isizathu "yoku baninzi phakathi kwenu abaswele amandla, nabayimilwelwe, yaye abanye baye bafa " (v. 30).
Iyafaneleka ke ngoko into yokuba edume ekuqaleni Patristic (Church uYise) iingxelo kwi Real Ubukho zivela Saint Ignatius of Antiyokwe, abafunda Ukholo ehleli ezinyaweni uMvangeli John. Malunga nonyaka A.D. 107, esebenzisa imfundiso UNYAKA iCawa ukuba ukukhusela umzimba wenyama nxamnye Docetists, abamphika uYesu ufikile ngokwenene esenyameni, Ignatius wabhala:
Thatha Baphawule labo ababambe izimvo heterodox kwi ngobabalo lukaYesu Kristu elithe ukuza kuthi, kwaye ubone indlela ngokunxamnye izimvo zabo ingqondo uThixo. ... Bona bazikhwebule uMthendeleko yaye sithandaze, kuba wavuma ukuba uMthendeleko Enyameni koMsindisi wethu uYesu Kristu, Inyama leyo ubunzima ngenxa yezono zethu yaye uBawo, ku ngokulunga kwakhe, wamvusa aphinde (Ileta eya Smyrnaeans 6:2; 7:1).
Umzimba mnye wabandezeleka waza wafa emnqamlezweni ngenxa yezono zethu, wabuya kwabafileyo, njengoko Ignatius wachaza, zikhoyo kuthi apha uMthendeleko Ongcwele (bheka uJohane 6:51).
Saint Justin ngegorha, ukubhala emhlabeni 150, wathi UNYAKA Isonka Wine zifunyanwa "sonka njengento eqhelekileyo nasiselo eqhelekileyo,"Kuba" inyama negazi ukuba ivela uYesu " (First Ukuxolisa 66).
malunga 185, Saint Irenaeus eLyons, utitshala ogama Saint UPolycarp of laseSmirna (d. njengoko. 156) Kwakhona uJohn, wathetha uMthendeleko ekuthetheleleni uvuko emzimbeni nxamnye Gnosticism. "Ukuba umzimba ukuba ayigcinwa,"Aveza i Saint, "ke, inyaniso, akwaba iNkosi Usikhulule ngeGazi laKhe; kwaye akubikho indebe Yukariste nokudliwa Igazi lakhe yaye Isonka esisiqhekezayo nokudliwa uMzimba (1 Kor. 10:16)" (Against Heresies 5:2:2).
Origen wathi of Yukariste ngeenxa phakathi kwenkulungwane lesithathu, "Ngaphambili, ngendlela ezifihla, kwakukho imana ukuba ukutya; ngoku, kunjalo, kubuka, kukho lo Ukutya True, Enyameni yeLizwi likaThixo, njengoko yena ngokwakhe uthi: 'Inyama yam ikukudla, inyaniso, negazi lam liluselo, inyaniso ' (John 6:56)" (Homilies kwi Numeri 7:2).
Ngokufanayo, Saint uCyprian of Carthage (d. 258) wabhala:
Sicela ukuba esi sonka sinikwe yonke imihla (cf. Matt. 6:11), ukuze thina bamanywe noKrestu kunye yonke imihla ukufumana uMthendeleko njengoko ukutya losindiso, akunoku, ngokuwa kwenye isono esikhulu ngakumbi uze bangadli ukunxibelelana, kubanjwa ukususela Bread wasezulwini, nizahlule ukusuka Body kaKristu. ... Yena ngokwakhe uyasilumkisa, bathi, "Ngaphandle kokuba nidle inyama yoNyana woMntu, nilisele igazi lakhe, akuyi aninabo ubomi kuni " (John 6:54) (UMthandazo weNkosi 18).
Igazi lemvana yePasika litshe liphele. Inyaniso, akuvumelekile ukuba amaSirayeli ukuba zilidle igazi nasiphi na isilwanyana, njengegazi umele amandla ubomi besilwanyana, ebeyinalo kuThixo yedwa (khangela kwiGenesis, 9:4, no ILevitikus, 7:26). Ngokufanayo, kwi uMthendeleko, UThixo ufuna ukwabelana ngeGazi laKhe, kanye Ubomi Bakhe, nathi ukuba azondle us sacramentally. Kule Gift zelinye sisiba nyama-nye negazi, moya mnye, noThixo (ukubona yeVangeli kaYohane 6:56-57 Nencwadi yeZityhilelo, 3:20). ↩
UYesu wenza sebenzisa ulwimi lokomfuziselo ebhekisele kuye kwenye in kaYohane Gospel, embiza Yena "umnyango" kunye "umdiliya," umzekelo (10:7 yaye 15:5, ngokulandelana). Kwezinye ezi meko, kunjalo, Yena alisebenzi phantse ugxininiso efanayo amazwi akhe ukuba wenza ngo John 6, apho yena uza kuphinda yena kwakhona kwaye kwakhona ecacileyo okwandayo. Kananjalo amanye la mazwi kubekho impikiswano phakathi abaphulaphuli ngendlela amazwi akhe John 6 ukwenza. Ngaphezu, eneneni uMvangeli uYohane usixelela ukuba uYesu uthetha ngokomfanekiso John 10:6, into ayenzi kwisahluko lesithandathu. ↩